Semalt: Iingcebiso ze-Web Scrape Tips - Ungaphutheli!
Xa ungeke ukwazi ukufumana idatha efunekayo kwiwebhu, kukho ezinye iindlela onokuzisebenzisa ukufumana loo miba efunekayo. Ngokomzekelo, umntu unokufumana idatha kwi-AP-based APIs, ukukhipha idatha kwii-PDF ezahlukeneyo okanye nakwiiwebhsayithi ze-scrape. Ukukhipha idatha kwi-PDFs ngumsebenzi onzima njengokuba i-PDF ayinakho ukuqulethe ulwazi oluchanekileyo olufunekayo. Ngakolunye uhlangothi, ngexesha lokukrazula kwesikrini, umxholo okhishwe uhlelwe yikhowudi okanye ngokusetyenziswa kwezinto ezifundwayo. Ukufumana idatha yewebhu ye-scrap kungaba ngumsebenzi onzima, kodwa xa umntu enengcamango yento ekufuneka yenziwe, kuba lula.
Idata efundekayo ngomatshini
Enye yeenjongo eziphambili zokutshitshiswa kwewebhu ukukwazi ukufikelela kwiinkcukacha ezifundwa ngumatshini. Le datha idalwe yikhompyutheni yokucubungula, kwaye ezinye zeempomplethi zayo ziquka i-XML, i-CSV, iifayile ze-Excel kunye no-Json. Idatha efundekayo ngomatshini enye yeendlela ezahlukahlukeneyo umntu angayisebenzisa ukuze athole idatha ye-web scrape njengendlela elula kwaye ayifuni izinga eliphezulu lezakhono ukuze likwazi ukuluphatha.
Iiwebhsayithi zokudweba ngenye yezindlela eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zokufumana ulwazi olufunekayo. Kukho ezinye iimeko xa iiwebhusayithi zingasebenzi kakuhle.
Nangona i-web scraping ikhethwa kakhulu, kukho izinto ezahlukahlukeneyo ezenza ukuba kube nzima ngakumbi. Ezinye zazo ziquka ikhowudi ye-HTML efomathiweyo kwaye i-block access access block. Imithintelo yomthetho ingaba yinkinga ekujongeni idatha yewebhu ye-scrape njengoko kukho abantu abathile abangayihoxisi ukusetyenziswa kweelayisenisi. Kwamanye amazwe, oku kubonwa njengento yokuxubha. Izixhobo ezinokukunceda ekutshitshiseni okanye ukukhipha ulwazi zibandakanya iinkonzo zewebhu kunye nokwandiswa kwesibhrawuzi kuye kuxhomekeke kwisixhobo soqhagamshelwano. Idatha yewebhu ye-scrape inokufumaneka kwi-Python okanye nakwi-PHP. Nangona le nkqubo idinga ubuninzi bezakhono, kunokuba lula ukuba iwebhusayithi ayisebenzisayo ilungileyo.